Qubanaha » Ergeyga Qaramada u qaabilsan Soomaaliya oo booqasho ku tagay Hargeysa
Ergeyga Qaramada u qaabilsan Soomaaliya oo booqasho ku tagay Hargeysa
Qubanaha.net-Hargeysa-Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa booqasho ku tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka Somaliland.
Safarkan oo ahaa kii u horeeyay ee Danjiruhu ku tago Hargeysa, tan iyo markii loo soo magacaabay Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
Danjire Keating ayaa la kulmay Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo, kuxigeenkiisa iyo qaar ka mid ah Golihiisa Wasiirada, iyagoo ka wada hadlay arrimaha abaaraha ka jira Somaliland, doorashooyinka iyo horumarka ka jira deegaanada Somaliland.
Ergeyga Qaramada Midoobey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeeddada socdaalkoodu yahay sidii loo ballaarin lahaa kaalinta ay Qaramada Midoobay ku leedahay taakulada dadka abaartu waxyeellaysay ee Somaliland, isagoo soo dhoweeyay sida diiran ee loogu soo dhoweeyay Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa sheegay in Keating iyo madaxweyne Siilaanyo ay ka hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wadashaqeynta Somaliland iyo Qaramada Midoobey.
Somaliland ayaa horay u diiday in xilligii la soo magacaabay Ergeygii Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay uu xafiis ka furto Magaalada Hargeysa, iyadoo sheegtay inay ka madax banaan yihiin Soomaaliya inteeda kale, isla markaana howlaha Xafiiska uu qabtana aanu quseyn Somaliland.
Deegaanada Somaliland ayaa waxaa xarumo ku leh qaar ka mid ah hey’adaha qaramada Midoobey iyo kuwa caalamiga oo Somaliland ka taageera dhinacyo badan, balse aanay u aqoonsaneyn sidii dowlad madax banaan oo kale.